အသက်၂၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ရွှေရောင် တလက်လက် နဲ့တောက်ပနေ တဲ့ ပုံလေးတွေ ကိုချပြ လာ တဲ့ အဆိုတော်Bobby Soxer – Shwe Yoe
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ မျက်နှာ ချိုသာနဲ့ အသံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အြပ်ည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်မလေး Bobby Soxer ကတော့ ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ရက်မြတ်လေးကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ Bobby Soxer က အသက် (၂၉)နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်ကို Bobby Soxer က သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေလည်း “Happy Birthday To Me. Age Unregretfully. ဘဝရဲ့ ပျော်စရာ ဝမ်းနည်းစရာ ကြည်နူးစရာ တချို့ အချိန်လေးတွေကို တချိန်ပြန်ကြည့်ရင် အမှတ်ရနေနိုင်အောင် ဘယ်နှစ်တုန်းကဘယ်လိုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေကို ဓါတ်ပုံလေးပြန်ကြည့်မိတိုင်း မှတ်မိနေအောင်လို့ အခိုက်အတန့်တချို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါရစေ နော်”ဆိုပြီး မွေးနေ့အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။
Bobby Soxer ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေကလည်း Bobby Soxerရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေအသီးသီးဆုတောင်းပေးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ရိသတ်ကြီးတွေလည်း Bobby Soxerရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ရင်ဖိုစရာကောင်းလွန်းတဲ့ အလှကို အရှင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ရဲ့ ပုံရိပ်လေး များ
လက်ရှိကာလမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေ တဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့ တဲ့ ဒိန်းဒေါင် (ရုပ်သံ)